मन्त्री आले सवार गाडीलाई ठ’क्क’र दि’ने पवन कडायत को हुन् ? « Etajakhabar
काठमाडौं । आफ्नो बयानका कारण चर्चामा रहनु भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले सवार गाडी दुर्घटनाग्र’स्त भएको छ । मंगलबार धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जादै गर्दा मन्त्री आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको हो ।
सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सुप प्र ०१००१ झ ३३३ गाडी विपरीत दिशाबाट आइरहेको बा ४ च १३७७ को कारसँग ठो’क्किँ’एको हो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक वकिल सिंहले दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्री आले महेन्द्रनगरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्को गाडी चढेर त्यसतर्फ गइसक्नु भएको छ । कैलालीको धनगढी विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रकाश जोशीका अनुसार मंगलबार साँझ साढे आठ बजे विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा मूल सडकमा पुग्ने बित्तिकै दुर्घटना भएको हो । जानकारी अनुसार कारले पहिले गाईलाई ठक्कर दिएको थियो ।
त्यसपछि अनियन्त्रित भई मन्त्री सवार कारलाई ठ’क्क’र दि’ए’को प्रहरीको भनाई रहेको छ । कार चालक कञ्चनपुर कृष्णपुर ९ निवासी पवन कडायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपालको जनसंख्या बढ्यो, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
२०७८ को नयाँ जनगणना काठमाडौंको जनसंख्या कति ?
काठमाडौ । कोभिड महामारी बढेपछि सरकारले केही मापदण्ड सहितका नियम लागू गरेको छ । सर्वसाधारणहरुले
काठमाडौं । मतदान गर्न जाँदै गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तुलसीप्रसाद चौधरी दुर्घटनामा परेर घाइते
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा वि’षा’दी’युक्त खाना खाँदा एकै परिवारका ५ जना बिरामी परेका छन्। मंगलबार कृष्णपुर
काठमाडौ । दुई परिवारबीच चलिरहेको मु द्दा मा वयान परिवर्तनका लागि दवाव दिन छिमेकीले नै